မကြာခင်ရောက်ရှိလာမယ့် အလန်းဆုံး Android ဂိမ်းများ | MyTech Myanmar
မကြာခင်ရောက်ရှိလာမယ့် အလန်းဆုံး Android ဂိမ်းများ
ဒီနှစ်ထဲမှာ PUBG Mobile, Alto’s Odyssey တို့လို ဂိမ်းတွေ ခေတ်စားလာပြီး Blizzard လို ဂိမ်းကုမ္ပဏီကြီးကအစ ဆူလွယ်နပ်လွယ် မိုဘိုင်းဂိမ်းဈေးကွက်ကို မျက်စောင်းထိုးလာကြပါပြီ။ ၂၀၁၉ ထဲမှာ မြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိတဲ့ ဂိမ်းတွေထဲက တော်တော်လေး ကောင်းမယ်လို့ ယူဆရတဲ့ ဂိမ်းအချို့ကို ဖော်ပြပေးပါရစေ။
၁. Stardew Valley
Steam ကစားသမား အများစုကတော့ ဒီဂိမ်းကို သိကြမှာပါ။ Stardew Valley ဟာ တချိန်က လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ Harvest Moon စတိုင် အင်ဒီဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်ထဲက ကွန်ပြူတာပလက်ဖောင်းမှာ ကစားလို့ ရနေတာပါ။ အခုတော့ မိုဘိုင်းပေါ်ကို ထိုးဖောက်လာမှာ ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ နင်တန်းဒိုးဆန်ဆန် 2D ဂရပ်ဖစ်နဲ့ အခြား မိုဘိုင်း Simulation တွေနဲ့ ကွဲထွက်နေမယ့် ပုံစံက အောင်မြင်မှုကို ရရှိစေဦးမလား ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ ဒီဂိမ်းကို လက်ရှိ iOS မှာ ရှစ်ဒေါ်လာနဲ့ ရရှိနေပြီဖြစ်ပြီး In-app Purchase ထပ်မပါဘဲ အပြည့်အဝ ဆော့နိုင်ပါတယ်။ Android ကို ရောက်လာမယ့် ရက်စွဲကိုတော့ အတိအကျ မကြေညာသေးပါဘူး။
၂. The Elder Scrolls: Blades
လက်ရှိမှာ Pre-register ပြုလုပ်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ Bethesda ဂိမ်းကုမ္ပဏီရဲ့ နာမည်ကြီး Elder Scrolls မိသားစုဝင် ဂိမ်းအသစ်ပါ။ First-person အမြင်နဲ့ ကစားရမယ့် RPG ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ မြို့ကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ရမယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြိုင်ဆိုင်ရမယ်၊ အခြားကစားသမားတွေနဲ့ မာလ်တီပလေယာ တိုက်ခိုက်နိုင်မယ် လို့ဆိုပါတယ်။ Bethesda ကတော့ Trailer တစ်ခုကို ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ပြီး ကြည့်ရတာ ဂရပ်ဖစ် ပိုင်းမှာ ကွန်ဆိုးဂိမ်း ကွာလတီမီအောင် ထုတ်လုပ်ထားတယ်လို့ ဆိုနိုင်မှာပါ။ အစက ၂၀၁၈ ဆောင်းရာသီမှာ ထွက်ဖို့ ကြံပေမယ့် အခုတော့ ၂၀၁၉ အစောပိုင်းကို ထွက်ရှိရက် ရွှေ့ဆိုင်းထားပါတယ်။ Free-to-Play လို့ ကြေညာထားတဲ့အတွက် In-app Purchase တွေကနေ ငွေရှာမယ်ဆိုတာ သံသယရှိဖို့ မလိုပါဘူး။
ဒီဂိမ်းထဲမှာတော့ ကစားသူဟာ Pimm လို့ခေါ်တဲ့ ဟန်းစတား ဟီးရိုးလေးအဖြစ် ကစားရမှာပါ။ မာလို လို့ခေါ်တဲ့ သတ္တဝါဆိုးကြီးနဲ့ သူ့အဖွဲ့ဟာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ Hamsterdam မြို့ကြီးကို အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဒုစရိုက်မြို့တော် အဖြစ် ပြောင်းလဲမှာကို တားဆီးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Gameplay အစမ်းပြထားတဲ့ Trailer ထဲမှာ ကြည့်ရတာတော့ Gameplay စတိုင်က တစ်မျိုးတည်း မဟုတ်ဘဲ အများကြီးစုပေါင်းထားတဲ့ ပုံစံပါပဲ။ Hamster-Fu ကိုယ်ခံပညာရှင် Pimm လေးက သူ့အဖိုးကိုပါ ကယ်တင်ရမှာပါ။ Pimm ကိုလည်း အဝတ်အစားတွေ အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲပေးနိုင်တာ မြင်ရပါတယ်။ Hamsterdam ဂိမ်းကို ဖန်တီးသူက Crowdfunding ကမ်ပိန်းတစ်ခုအဖြစ် စတင်ခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ သုံးသောင်းကျော် ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လလောက်မှာ ထွက်လာတော့မှာပါ။ စမ်းသပ် Demo ဗားရှင်းကိုတော့ အစမ်းဆော့နိုင်ပါပြီ။
၄. Bad North
Bad North ကတော့ RTS Strategy အမျိုးအစား ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး လှပတဲ့ Minimalist စတိုင် ဂရပ်ဖစ်ကို ပိုင်ဆိုင်တယ်။ သင်ဟာ ဗိုက်ကင်း ပင်လယ်ဓါးပြတွေ ကျူးကျော်လာတာကို ခုခံပေးရမယ့် မင်းသားတစ်ဦးအဖြစ် ကစားရမှာ ဖြစ်ပြီး ကျွန်းငယ်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကူးသန်းကာ ခံစစ်ကို ဖန်တီးရမှာပါ။ စစ်တပ်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး ကျွန်းရဲ့ တည်နေရာပထဝီပုံစံကို အားသာချက် ရယူကာ လှေတွေနဲ့ ရောက်လာတဲ့ ဗိုက်ကင်းတွေကို တွန်းလှန်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းဟာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှ စကစားနိုင်မယ့် Teen Rating သတ်မှတ်ထားပြီး Xbox One, PS4 တို့မှာ ရရှိနေပါပြီ။ Android ကိုတော့ ၂၀၁၉ မှာ ရောက်လာမှာဖြစ်ပေမယ့် အချိန်အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး။
H1Z1 ကတော့ PUBG နဲ့ Fortnite တို့လို Battle Royale ဂိမ်းတစ်ခုပါပဲ။ အဲဒီဂိမ်းတွေလောက်တော့ ခေတ်မစားပေမယ့် သူလဲ သူ့ပရိသတ်နဲ့သူပါ။ ကစားသူ စုစုပေါင်း ၁၅၀ ထိကို နေရာတစ်ခုစီ လေယာဉ်နဲ့ ခေါ်ဆောင်ထားခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး တစ်ဖွဲ့ထဲ ကျန်သည်ထိ တိုက်ခိုက်ရမှာပါ။ အခြားကစားသမား လေးယောက်ထိ ပါတီဖွဲ့ပြီး ကစားနိုင်ပါတယ်။ H1Z1 ဟာ PS4 နဲ့ ကွန်ပြူတာ ပလက်ဖောင်းတွေမှာ အခမဲ့ကစားနိုင်တဲ့ ဂိမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး မိုဘိုင်းဗားရှင်းကိုလည်း ထုတ်လုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထားပေမယ့် ထွက်ရှိရက်ကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
ဒီနှဈထဲမှာ PUBG Mobile, Alto’s Odyssey တို့လို ဂိမျးတှေ ခတျေစားလာပွီး Blizzard လို ဂိမျးကုမ်ပဏီကွီးကအစ ဆူလှယျနပျလှယျ မိုဘိုငျးဂိမျးဈေးကှကျကို မကျြစောငျးထိုးလာကွပါပွီ။ ၂၀၁၉ ထဲမှာ မွငျတှရေ့ဖှယျရှိတဲ့ ဂိမျးတှထေဲက တျောတျောလေး ကောငျးမယျလို့ ယူဆရတဲ့ ဂိမျးအခြို့ကို ဖျောပွပေးပါရစေ။
Steam ကစားသမား အမြားစုကတော့ ဒီဂိမျးကို သိကွမှာပါ။ Stardew Valley ဟာ တခြိနျက လူကွိုကျမြားခဲ့တဲ့ Harvest Moon စတိုငျ အငျဒီဂိမျးတဈခုဖွဈပွီး ၂၀၁၆ ခုနှဈထဲက ကှနျပွူတာပလကျဖောငျးမှာ ကစားလို့ ရနတောပါ။ အခုတော့ မိုဘိုငျးပျေါကို ထိုးဖောကျလာမှာ ဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ နငျတနျးဒိုးဆနျဆနျ 2D ဂရပျဖဈနဲ့ အခွား မိုဘိုငျး Simulation တှနေဲ့ ကှဲထှကျနမေယျ့ ပုံစံက အောငျမွငျမှုကို ရရှိစဦေးမလား ဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။ ဒီဂိမျးကို လကျရှိ iOS မှာ ရှဈဒျေါလာနဲ့ ရရှိနပွေီဖွဈပွီး In-app Purchase ထပျမပါဘဲ အပွညျ့အဝ ဆော့နိုငျပါတယျ။ Android ကို ရောကျလာမယျ့ ရကျစှဲကိုတော့ အတိအကြ မကွညောသေးပါဘူး။
လကျရှိမှာ Pre-register ပွုလုပျနိုငျပွီဖွဈတဲ့ Bethesda ဂိမျးကုမ်ပဏီရဲ့ နာမညျကွီး Elder Scrolls မိသားစုဝငျ ဂိမျးအသဈပါ။ First-person အမွငျနဲ့ ကစားရမယျ့ RPG ဂိမျးဖွဈပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ မွို့ကို ဖနျတီးတညျဆောကျရမယျ၊ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ပွိုငျဆိုငျရမယျ၊ အခွားကစားသမားတှနေဲ့ မာလျတီပလယော တိုကျခိုကျနိုငျမယျ လို့ဆိုပါတယျ။ Bethesda ကတော့ Trailer တဈခုကို ထုတျလှငျ့ပေးခဲ့ပွီး ကွညျ့ရတာ ဂရပျဖဈ ပိုငျးမှာ ကှနျဆိုးဂိမျး ကှာလတီမီအောငျ ထုတျလုပျထားတယျလို့ ဆိုနိုငျမှာပါ။ အစက ၂၀၁၈ ဆောငျးရာသီမှာ ထှကျဖို့ ကွံပမေယျ့ အခုတော့ ၂၀၁၉ အစောပိုငျးကို ထှကျရှိရကျ ရှဆေို့ငျးထားပါတယျ။ Free-to-Play လို့ ကွညောထားတဲ့အတှကျ In-app Purchase တှကေနေ ငှရှောမယျဆိုတာ သံသယရှိဖို့ မလိုပါဘူး။
ဒီဂိမျးထဲမှာတော့ ကစားသူဟာ Pimm လို့ချေါတဲ့ ဟနျးစတား ဟီးရိုးလေးအဖွဈ ကစားရမှာပါ။ မာလို လို့ချေါတဲ့ သတ်တဝါဆိုးကွီးနဲ့ သူ့အဖှဲ့ဟာ ငွိမျးခမျြးတဲ့ Hamsterdam မွို့ကွီးကို အန်တရာယျရှိတဲ့ ဒုစရိုကျမွို့တျော အဖွဈ ပွောငျးလဲမှာကို တားဆီးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ Gameplay အစမျးပွထားတဲ့ Trailer ထဲမှာ ကွညျ့ရတာတော့ Gameplay စတိုငျက တဈမြိုးတညျး မဟုတျဘဲ အမြားကွီးစုပေါငျးထားတဲ့ ပုံစံပါပဲ။ Hamster-Fu ကိုယျခံပညာရှငျ Pimm လေးက သူ့အဖိုးကိုပါ ကယျတငျရမှာပါ။ Pimm ကိုလညျး အဝတျအစားတှေ အမြိုးမြိုး ပွောငျးလဲပေးနိုငျတာ မွငျရပါတယျ။ Hamsterdam ဂိမျးကို ဖနျတီးသူက Crowdfunding ကမျပိနျးတဈခုအဖွဈ စတငျခဲ့ပွီး ဒျေါလာ သုံးသောငျးကြျော ရရှိခဲ့တဲ့အတှကျ ၂၀၁၉ ခုနှဈ မတျလလောကျမှာ ထှကျလာတော့မှာပါ။ စမျးသပျ Demo ဗားရှငျးကိုတော့ အစမျးဆော့နိုငျပါပွီ။
Bad North ကတော့ RTS Strategy အမြိုးအစား ဂိမျးတဈခုဖွဈပွီး လှပတဲ့ Minimalist စတိုငျ ဂရပျဖဈကို ပိုငျဆိုငျတယျ။ သငျဟာ ဗိုကျကငျး ပငျလယျဓါးပွတှေ ကြူးကြျောလာတာကို ခုခံပေးရမယျ့ မငျးသားတဈဦးအဖွဈ ကစားရမှာ ဖွဈပွီး ကြှနျးငယျတှေ တဈခုပွီးတဈခု ကူးသနျးကာ ခံစဈကို ဖနျတီးရမှာပါ။ စဈတပျတဈခုကို ပိုငျဆိုငျပွီး ကြှနျးရဲ့ တညျနရောပထဝီပုံစံကို အားသာခကျြ ရယူကာ လှတှေနေဲ့ ရောကျလာတဲ့ ဗိုကျကငျးတှကေို တှနျးလှနျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီဂိမျးဟာ ဆယျကြျောသကျအရှယျမှ စကစားနိုငျမယျ့ Teen Rating သတျမှတျထားပွီး Xbox One, PS4 တို့မှာ ရရှိနပေါပွီ။ Android ကိုတော့ ၂၀၁၉ မှာ ရောကျလာမှာဖွဈပမေယျ့ အခြိနျအတိအကြ မသိရသေးပါဘူး။
H1Z1 ကတော့ PUBG နဲ့ Fortnite တို့လို Battle Royale ဂိမျးတဈခုပါပဲ။ အဲဒီဂိမျးတှလေောကျတော့ ခတျေမစားပမေယျ့ သူလဲ သူ့ပရိသတျနဲ့သူပါ။ ကစားသူ စုစုပေါငျး ၁၅၀ ထိကို နရောတဈခုစီ လယောဉျနဲ့ ချေါဆောငျထားခဲ့ပွီး နောကျဆုံး တဈဖှဲ့ထဲ ကနျြသညျထိ တိုကျခိုကျရမှာပါ။ အခွားကစားသမား လေးယောကျထိ ပါတီဖှဲ့ပွီး ကစားနိုငျပါတယျ။ H1Z1 ဟာ PS4 နဲ့ ကှနျပွူတာ ပလကျဖောငျးတှမှော အခမဲ့ကစားနိုငျတဲ့ ဂိမျးတဈခု ဖွဈပွီး မိုဘိုငျးဗားရှငျးကိုလညျး ထုတျလုပျနပွေီဖွဈကွောငျး ကွညောထားပမေယျ့ ထှကျရှိရကျကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
MyTech Myanmar2018-12-19T22:20:02+06:30December 19th, 2018|Gaming, News|